Zimbabwean authorities report two people have died following Saturday's bomb attack on President Emmerson Mnangagwa in B
Zimbabwean authorities report two people have died following Saturday's bomb attack on President Emmerson Mnangagwa in Bulawayo, with several others in critical condition.
Zimbabwean authorities report that two people have died following Saturday's bomb attack on President Emmerson Mnangagwa in Bulawayo, with several others in critical condition.
2018-07-03 01:15:32 (First version)
2018-06-23 (Context: Bulawayo, Emmerson Mnangagwa, President of Zimbabwe, Zimbabwe)
2018-08-3 (Context: Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe)
Emmerson Mnangagwa is sworn in as the President of Zimbabwe, after an assassination attempt two months earlier.
2018-08-26 (Context: Emmerson Mnangagwa, President of Zimbabwe)
2017-11-6 (Context: Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe)
Emmerson Mnangagwa is sworn in as the new President of Zimbabwe pending elections next year.
2017-11-24 (Context: Emmerson Mnangagwa, President of Zimbabwe)